Chelsea oo cambaareyneysa xadgudubyada diimeed ee lala beegsanayo Aston Villa | Berberanews.com
Home CAYAARO Chelsea oo cambaareyneysa xadgudubyada diimeed ee lala beegsanayo Aston Villa
Ciyaaraha-(Berberanews)-Chelsea ayaa cambaareysay falalka taageere oo lagu arkay baraha bulshada oo ujeedadoodu tahay xadgudub kooxeed oo ka dhan ah xiddiga Aston Villa ee reer Scotland John McGinn.
Blues ayaa 3-0 ku garaacday Villa Sabtidii. Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa bilaabay olole weyn oo ka dhan ah cunsuriyadda sannadkii hore kaas oo loogu magac daray No To Nate.
“Waan ka warqabnaa fiidiyoow ku baahaya baraha bulshada oo muujinaya shaqsi adeegsanaya erayo aflagaado ah oo dhaqan diimeed ah kana mid ahaa dadkii badnaa ee ku sugnaa Stamford Bridge Sabtidii,” ayay tidhi Chelsea.
“Naadiga Kubadda Cagta ee Chelsea waxay u aragtaa dhammaan noocyada dhaqanka takoorka gebi ahaanba aan la aqbali karin waana cambaareyneynaa luqadda la adeegsaday.
“Naadigu wuxuu ka shaqeynayaa inuu aqoonsado qofka ku lugta leh wuxuuna ka qaadi doonaa tallaabada ugu adag ee suurtogalka ah.”
Bayaan ay soo saartay Aston Villa ayaa ku dartay: “Aston Villa waxay uga mahadcelineysaa saaxiibadeena Chelsea FC ficilka deg deg ah oo qaddarin leh oo ay ku cambaareynayaan cuqdad – loola jeeday John McGinn ee Stamford Bridge iyo bilaabidda baadhitaan lagu ogaanayo dambiilaha.
“Aston Villa waxay si buuxda u taageeri doontaa baadhiaankaas. Labada naadi uma dulqaadan karaan aafada takoorka nooc kasta oo ay tahay marka ay ka dhacdo garoonkeena.”
Qoraal uu ku soo qoray Twitter -ka ciyaaryahankii hore ee qadka dhexe ee Chelsea Nevin, oo sidoo kale ah khabiirka BBC Radio 5 Live, ayaa yidhi: “Waxaan hadda helay fiidiyoow faallooyin diimeed oo xun oo loogu talagalay John McGinn ee Stamford Bridge.
“Hadda ku wajahan halkaas kulanka berri oo aan la hadli doono kooxda. Waxaad ka helaysaa aflagaado xun taageerayaal badan oo kooxo badan ah, laakiin tani ma aha cudurdaar MAYA! Waxaan rajaynayaa oo aan filayaa baadhitaanno!”
Previous articleMaayar Ciddin: cidkasta oo horumarka Berbera ka xun waxan ku garaacnaa waxqabad
Next articleWeeraryahanka Barcelona Martin Braithwaite oo qalliin lagu samaynayo
Ciyaartii Brazil iyo Argentine oo muran u baaqatay